Inona no ho hita any Irlandy Avaratra | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Irlandy Avaratra
Nandritra ny taona maro Irlandy Avaratra Tsy teo amin'ny sarintanin'ny mpizahatany izy io, nanaloka ny rahavaviny mahaleo tena sy ny tantarany politika, fa nandritra ny fotoana kelikely dia nahita indray ireo fizahan-tany ny fizahantany. !! Arahabaina !!
Androany, noho izany, miandry antsika i Irlandy Avaratra sy ireo zava-manintona rehetra ao aminy: trano mimanda, fiangonana, làlan'ny medieval ary Game of Thrones.
1 Irlandy Avaratra
2 Inona no ho hita any Irlandy Avaratra
Es ampahan'ny UK, ilay ampahany tsy nahaleo tena tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. Nandritra ny am-polony taona maro ny tantarany politika dia voamariky ny fifandonana teo amin'ny katolika sy ny protestanta ary ny hetsika fampihorohoroana an'ny IRA ary ny fisian'ny tafika britanika eto amin'ny nosy.
Tahaka ny ahoana ny jeografia amin'ity nosy ity izay misy tantara tahaka izany? Eny, tamin'ny fotoan'ny Ice Age dia nanjary mangatsiaka ary tsy dia mahafinaritra ny ririnina. Ny fony dia voalaza fa Loch Neagh misy 400 kilometatra toradroa, ny lehibe indrindra amin'ny Nosy Britanika rehetra. Misy farihy maro fa misy ihany koa tendrombohitrabasalt sy granita, havoana sy lohasaha.
Tany taloha be ala io, ary misy hazo terebinta, kesika, hazomalahelo sy ny maro hafa, saingy amin'izao fotoana izao ny faritra misy ala dia tsy mahatratra 10% akory ary amin'ireo karazana tany am-boalohany dia tsy misy mijanona. Mahamenatra Amin'ny lafiny geopolitika misy faritra manan-tantara enina: Antrim, Fermanagh, Londonderry, Tyrone, Down ary Armagh.
Ahoana ny fomba hifindranao amin'ireo distrika ireo? Eny, tsy hoe i Irlandy Avaratra no manana rafitra fitaterana lehibe, tsy izany no izy. Tsy sarotra ny fivezivezena amin'ireo tanàna lehibe, fa kosa ny fandosirana ireo ivon-toerana an-tanàn-dehibe dia mitaky vola bebe kokoa ary mila fandaminana bebe kokoa.
Toy ny any trano mimanda sy tranobe manan-tantara, morontsiraka, trano mendri-kaja, tranombakoka, ala ary zaridaina ary mazava ho azy, ireo toerana misy ifandraisany Lalao amin'ny seza fiandrianana. Tombanana ho 200 ny trano mimanda hitsidika azy na dia tsy maintsy misafidy aza ny tsirairay. Antsika ity:
Castle an'i Carrickfergus: Io no lehibe indrindra sy malaza indrindra eto amin'ity faritany ity, mbola antitra noho Belfast aza izy io, natsangana tamin'ny 1177 avy amin'i John de Courcy, mpanafika Anglo-Norman avy any Ulster. Misokatra ho an'ny besinimaro izy io ary mendrika tsidihina.
Castle an'i Enniskillen: Nitarika fikomiana maro hanohitra ny Anglisy izy satria eo amin'ny sisintanin'i Irlanda. Ny Maguires, fianakaviana Gaelic no nanangana azy, ary miaraka amin'ireo taonjato enina dia miorina eo amoron'ny Farihy Erne izy io.
Dunluce Castle: Eo amin'ny tandrifin'ny vatolampy akaikin'ny ranomasina izy io ary na dia rava aza izy ireo dia tsy maintsy ireo no rava am-pitiavana indrindra eto an-tany. Izy io dia naorina tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, hita ao amin'ny Ny Tantara ao Narnia ary hitanao izany ao amin'ny County Antrim.
Kintana Harry Avery: Any County Tyrone izy io ary iray amin'ireo vitsy natsangan'ny Lehiben'ny Irlandey O'Neill, navadika ho Harry Avery. Mahavariana, eny an-tendrombohitra, misy fahitana mahafinaritra. Enina taonina mahery izao.
Trano Belfast: Tsy toa trano mimanda izy io, eo afovoan-tanàna izy io, ary nataon'ny Normanina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia tranon'ny fianakavian'i Chichester izy io ary na dia tamin'ny endrika Norman aza izy io dia nodorana ary namboarina tamin'ny fomba Victoria.
Castle Shane: dia ao Antrim ary hita ao amin'ny Game of Thrones. Nirehitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary azo tsidihina ireo rava.
Monea Castle: Namboarina izy io nandritra ny taom-pambolena anglisy tany Irlandy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na eo aza ny tantarany dia saika mitohy io.
Castleborough Castle: Tranobe Zeorziana namboarina tamin'ny faran'ny taonjato faha-10. Ankehitriny dia lapan'ny mpanjaka izy, fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka raha any Irlandy Avaratra. Manana zaridaina mahafinaritra izy ary ny zavatra rehetra dia azo vangiana manodidina ny £ XNUMX.
Ankoatra ireo lapa ireo dia misy ny hafa izay manolotra ny diany fa tsy mitsidika intsony. Ohatra, azonao atao ny Làlan'ny Castle WardCounty Down, lalana iray kilaometatra mamakivaky tany mahafinaritra izay mitety ny lapan'i Audrey Castle, izay ao amin'ny andiany Game of Thrones dia ny tobin'i Robb. Fananganana taonjato faha-XNUMX izy io ary ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka dia afaka mihinana trondro tsara eo an-toerana ianao.
Trano hafa handehandehanana manodidina no Castle Benburb, Castle Antrim, Dunseverick & Dunluce Castle ary ny Crom Estate, ohatra. Ianao ve mila mijanona matory ao amin'ny trano mimanda? Azo atao izany. Azonao atao izany ao amin'ny Castle Cromao amin'ny Lapan'ny rano tery, sokajy kintana dimy, na ao amin'ny Ballygally Castle, kintana efatra ary misy morontsiraka fasika eny amin'ny helodrano mitovy anarana, ohatra.
Trano manan-tantara hafa azonao tsidihina dia ny Abbeys sy toerana misy monasiteran'i Irlanda AvaratraNy Camino de San Patricio dia mamakivaky ireo tany ireo, ka eto no toerana ara-pivavahana tsara indrindra azo tsidihina:
Lohataona Struell- Izy io dia ao amin'ny St. Patrick's Trail ary eo amin'ny lohasaha iray miala an'i Downpatrick. Toerana fivahinianana malaza izy io hatramin'ny taonjato faha-XNUMX ary inoana fa manana hery manasitrana ny rano.
Monastera Bonamargy: Any County Antrim izy io ary naorin'i Rory MacQuillian tamin'ny taona 1500. Tsy misy tafo io fa milamina tsara.
Inch Abbey: Eo amoron'ny Ony Quoile no misy azy ary i John de Courcy no nanorina azy. Ny sisa tavela amin'ireo trano dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX.
Grey's Abbey: Niorina tamin'ny 1193 izy ary ao amin'ny volan'ny Rosemount Residence. Rava izy io, saingy toerana tsara tarehy.
Monasiteran'i Nendrum- Izy io dia ao anatin'ny San Patricio Trail ihany koa ary inoana fa nataon'i San Machoi tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Nosy Devenish: izany dia ao amin'ny Farihin'i Fermanagh, lavitra ary rava. Nandritra ny taona maro dia noravan'ny Vikings ilay faritra, saingy tamin'ny vanim-potoana antenatenany dia niroborobo izy io.
Ankoatra ny fitsidihana ireo tranonkala manan-tantara, zavatra tiako manokana, manana toerana itadiavana Irlandy Avaratra mankafy ny toetrany ary manaova fanatanjahan-tena amin'ny rano, bisikileta, jono, golf, fitsangatsangana na fandaniana andro any amoron-dranomasina.
Ataovy ny Làlan'ny morontsiraka Tena traikefa iray izy io, eny: manomboka any Binevenagh izy io, mandalo an'i Mountandel, Bushmills Distillery, tetezana Carrick-a-rede, Joey & Robert Memorial Gardens, Arthur's House, Rathlin Island, the Làlan'ny Giant's… Mijanona eto aho: World Heritage Site izy io ary tranga ara-jeolojika misy tsanganana basalt 40 niforona 60 tapitrisa taona lasa izay.
Fa ambonin'izay rehetra mahaliana anao Lalao amin'ny seza fiandrianana? Betsaka ny zavatra azo atao zana-tsipìka sy traikefa hariva fisakafoanana ny Fitsidihana tarihina amin'ireo tranokala tena nisy ny sary nalaina sary.
Ny marina dia izay lamaody kokoa no mifandraika amin'ity andiany HBO ity fa talohan'io ny tantaran'ny titanic naka ny fifantohana rehetra ary amin'ity lafiny ity, any Belfast, tsy azoko adino ny tranombakoka, ny tokotanin-tsambo ary ny zava-mahatalanjona rehetra izay namboarin'i Irlandy Avaratra manodidina ny fananganana sy ny voina nanjo an'io sambo angano io. Aza adino izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » firenena » United Kingdom » Inona no ho hita any Irlandy Avaratra
Inona no ho hita any Piran, Slovenia